Motorola Moto X ကို 2014, ပြန်လည်သုံးသပ် | Androidsis
တစ်ဖန်ရက်ရောမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Motorola စပိန်အလွန်အထူးသဖြင့်သူငယ်ချင်းထံမှ ဗစ်တာ, ယနေ့ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံသောဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆောင်ကြဉ်းနိုင် အားလုံးကောင်းမကောင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက် ဘာအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း Motorola Moto X ကို 2014ယနေ့မြင်တွေ့နေရသော Android မြင်ကွင်းတွင်အာရုံခံစားမှုဖြစ်စေသောဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုသည်သံသယရှိစရာမလိုပါ။
အလွန်အမင်းမျှော်လင့်ထားသည့် terminal နှင့်ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ ၎င်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်သင်၏ပရိုဆက်ဆာမှစတင်သည် Qualcomm မှ Sanpdragon 801 quad-core နှင့်အများဆုံးနာရီအမြန်နှုန်း ၁ ဂါဇနှင့် GPU ကို Adreno 330 ဂရပ်ဖစ်အရစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးအကောင်းဆုံးတောင်းဆိုမှုများကိုရိုက်ကူးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပင်ဗားရှင်းအပေါ်အားကိုး, ၎င်း၏သိုလှောင်မှုမှတ်ဉာဏ်မှတဆင့်သွား internal memory 32 GB သူတို့တစ်တွေမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူထိုသူအပေါင်းတို့သည် 2Gb RAM နောက်ခံတွင်အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာနှင့်ပင်အလုပ်လုပ်စဉ်ချောမွေ့။ တည်ငြိမ်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်လုံလောက်သည်။
2 UI ကို
၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအရောင်အားဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရွေးနိုင်သည့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ကြော့ရှင်းသော terminal ကိုတွေ့ရသည်။ အဖြူရောင်ဗားရှင်း ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ခဲ့သလိုမျိုး အနက်ရောင်ဗားရှင်း။ ၎င်းတို့အားလုံးကို Motorola ဝက်ဘ်ဆိုက်မှလျှောက်လွှာနှင့်တပ်ဆင်နိုင်သည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူကျွန်ုပ်တို့၏ Moto X 2014 terminal ကိုအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဝန်ဆောင်မှုဟာစပိန်နိုင်ငံကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတာသတိရပါ။
သင့် panel ၏အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက် 5,2 "အချင်း amoled နှင့် resolution FullHDငါပြောချင်တာကငါကိုယ်တိုင်အဲဒါကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ၊ ဒါဆိုစမတ်ဖုန်းကိုဆက်ပြီးဖုန်းဆက်လို့ရတယ်၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ.
User interface နှင့် ပတ်သက်၍ Motorola က Mount လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် လုံးလုံးလျားလျား Android ဗားရှင်း 4.4.4ဒါကတကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါ terminal ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လျော့ပြေတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်Google Nexus အကွာအဝေးကိုရရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Android L ၏နောက်ဆုံးထွက်နှင့်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Android L ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံမှုများရရှိနိုင်ရန်အပြင်
ဒီ Moto X 2014 အသစ်၏ကင်မရာ (သို့) ကင်မရာအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းဆုံးအနောက်ဘက် ၁၃ megapixel ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးသားဖို့ပြောရမယ်။ ဒါကကံမကောင်းတာကသူ့ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းရိုးရှင်းတဲ့ကင်မရာအင်တာဖေ့စ်တစ်ခုရှိတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ လက်စွဲပြင်ဆင်မှုရွေးစရာများ၊ မြင်ကွင်းအသုံးအဆောင်သို့မဟုတ်ဒီကိရိယာများမှာများသောအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးသော Android ရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပျောက်ဆုံးနေသည်။
၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်တွင် ရှေ့ကင်မရာ2Megapixel selfies အတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော resolution သည်နောက်ကင်မရာနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော selfies ရိုက်ကူးရန်အတွက်အရည်အသွေးထက်ပိုသောအရာများကိုပေးသည်ဟုဆိုသည်။ ကျယ်ပြန့်သော selfies သည်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောထောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည် ရုပ်ပုံကိုယူသောအခါပိုမိုရုပ်ပုံရိုက်ကူးရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မာလ်တီမီဒီယာကဏ္မှာသူတို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ရှေ့စပီကာနှစ်ခု ဒါကကျွန်တော်တို့ကို မယုံနိုင်လောက်အောင်အရည်အသွေးစတီရီယိုအသံ၎င်းကို ပို၍ ကြော့ရှင်းသောရသဗေဒနှင့်ပြီးအောင်ပြုလုပ်စဉ်။
သိုလှောင်မှုပမာဏအရကျွန်ုပ်တို့တွင်ဗားရှင်းနှစ်ခုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်အနည်းငယ်မျှတသည်ဟုထင်ရသည်။ Internal Storage 16 GBနှင့်အခြားဗားရှင်း 32 Gb၎င်းသည်တကယ့် shit သို့မဟုတ်ကြီးမားသောပျက်ကွက်မှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် ပြင်ပသိုလှောင်မှုအလတ်စားမပါဝင်ပါဘူး ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူအဖြစ် သော microSD၎င်းသည် USB-OTG နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်းသုံးစွဲသူများအဖို့၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုနည်းနည်းပြန်ဆွဲယူသည်။
အခြားဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့အနည်းဆုံးကြိုတင်သိထားရမယ်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ကျန်နေခဲ့တဲ့ဘက်ထရီရဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ။ 23oo MAH ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်ဘက်ထရီများကိုပေးထားသော Note 4, Galaxy S5 သို့မဟုတ် LG G3 ကဲ့သို့သောဆိပ်ကမ်းများနှင့်အလွန်ဝေးသည် 3000 mAh ဘက်ထရီ။ မျှတမှုရှိသော်လည်း Terminal ကိုပျှမ်းမျှအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖော်ပြသင့်သည် Moto X 2014 အသစ်တွင် USB charger ကိုအသုံးမပြုပဲအလုပ်လုပ်သောနေ့ရက်တစ်ခုလုံးပြီးစီးရန်ပြသနာများမရှိခဲ့ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » ကျွန်ုပ်တို့သည် Motorola Moto X 2014 အသစ်ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ငါဘက်ထရီအကြောင်းအသေးစိတ်ပြောချင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုစိတ် ၀ င်စားဖို့ကောင်းတာက !!!!
ကျွန်ုပ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရှင်းပြထားသောဗွီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်သည်မှတ်ချက်ပြုထားပါသည်၊ သာမာန်အားဖြင့် terminal ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၂၄ နာရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂ နာရီမျှသာဖန်သားပြင်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ အပေါ်မျက်နှာပြင်သုံးလေးနာရီ။
၎င်းသည်အကောင်းဆုံးသောစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကအတော်လေးနိမ့်တယ်လို့ထင်ပေမယ့်လည်းလာပါတယ်။ ဆဲလ်ဖုန်းနဲ့အတူတစ်နေကုန်အသုံးပြုလေ့ရှိတယ်၊ ဂူဂဲလ်ရဲ့ android lollipop ပရောဂျက်ကြောင့်ဒီဟာအများကြီးတိုးတက်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကျွန်တော်မမှတ်မိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကောင်းသော revew, နှုတ်ဆက်သည်!
Dropbox သည် SD ကဒ်သို့ဖိုင်များကိုတင်ပို့ရန်အထောက်အပံ့၊ Android L နှင့်အခြားအရာများအတွက်ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူမွမ်းမံထားသည်
Android တွင် WhatsApp နှင့် SMS စာတိုများကိုအလွယ်တကူပုံနှိပ်နည်း